Tonizia: Famelezana ny fahalalaham-pitenenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2018 15:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, polski, English
Nanamafy indray ny “fanohanany mafy” ny fahalalaham-pitenenana ny governemanta Toniziana. Araka ny tatitry ny gazety eo an-toerana tamin'ny Talata 27 Janoary, nihodidina ny biraon'ny onjam-peo zanabolana vao nisokatra vao haingana, Kalima ireo polisy nanao fanamiana sivily ary nisamboatra ny iray tamin'ireo mpanao gazety, Dhafer Ottey. Tamin'ny Alarobia, nijanona tao amin'ny tranoben'ny onjam-peo ireo mpitati-baovao sy mpanao gazetin'ny Kalima ary nanohy nandefa fandaharana. Niherisetra am-bava sy ara-batana tamin'ireo olona mifandray amin'ny Kalima ihany koa ny polisy. Voatafika ilay mpikatroka ny zon'olombelona, Zouhair Makhlouf, (araka ny hita amin'ny lahatsary) sy i Omar Mestiri, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny tranonkalan'ny Kalima, izay norahonana ho faty tamin'ny antsy. Nanohy nanevateva ireo mpanao gazetin'ny Kalima izay tsy tao anatin'ny tranobe sy ireo olona marobe tonga haneho fanohanana ho an'ny mpiasan'ny Kalima ny polisy. Tamin'ny zoma 30 Janoary, niditra tao amin'ny trano ny polisy ary naka ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fampielezam-peo. Ity ny lahatsary mampiseho ny fahirano natao tamin'ny Kalima.
Fanampin'izany, noraofin'ny minisiteran'ny Atitany an-keriny ihany koa ny gazety laharana faha-113 an'ny gazetin'ny mpanohitra “Attariq El Jadid” tamin'ny Zoma 30 Janoary, alohan'ny hanaterana ireo gazety teny amin'ny kiôska, voalaza fa namoaka ny antontan-taratasy ara-pitsarana momba ny fakana am-bavany voafonja iray tamin'ny antsoina hoe “Hetsika Gafsa” ny gazety. Famoahana izay tsy ara-dalàna araka ny voalazan'ny Lalàna 63 sy 73 ao amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny Fanaovan-gazety izay mandràra famoahana antontan-taratasy ara-pitsarana. Araka ny lalàna, tsy azo avoaka ireo atontan-taratasy ireo raha tsy efa navoaka ampahibemaso teo anoloan'ny lapan'ny fitsarana: Amin'ity tranga manokana ity, nampahafantarina ny fitsarana tamin'ny 11 Janoary 2009 ireo antontan-taratasy ara-pitsarana voalaza, ka tokony mahatonga ny famoahana ho ara-dalàna araka ny filazan'ireo mpanao gazety. Niresaka momba izany sivana izany androany ny bilaogy Farda-wla9at -O5taha tamin'ny filazàna ny lahatsoratry ny gazety amin'ny teny Frantsay “Le MONDE”
Tonizia: Gazety mpanohitra voasivana noho ny fanitsakitsahana ny Fehezan-dalàna mifehy ny gazety
Nogiazana noho ny didim-pitsarana ny gazety Toniziana mpivoaka isan-kerinandro “Attariq Al-Jadid” noho ny fanitsakitsahana ny fehezan-dalàna mifehy ny gazety, araka ny fantatra tamin'ny loharanom-baovaon'ny fanjakana.
Avy amin'ny baiko “araka ny andininy faha-63 sy 73 amin'ny Fehezandalàna mifehy ny gazety” ny fanagiazana, araka ny filazana navoakan'ny sampan-draharaham-panjakana TAP.
Nilaza tamin'ny AFP i Hatem Chaâbouni, talen'ny ny sampana amin'ny fiteny roa ao amin'ny Hetsika Ettajdid (Antoko Fanavaozana, ara-dalàna) fa nandefa ny dikan-teny tamin'ny fakàna am-bavany an'i Bechir Laabidi, iray amin'ireo mpitarika ny hetsika ara-tsosialin'ny Gafsa (atsimo) ilay laharana noraofina, eo an-dalana ny raharaha Gafsa izay nampiakarina fitsarana ambony.
Azo ampahafantarina ny vahoaka ny famotopotorana ny voampanga raha vao manomboka ny fotoam-pitsarana azon'ny daholobe atrehina”, hoy i Adel Chaouch, lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny gazety.
Ny andininy ao amin'ny fehezandalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety voalaza dia mandràra, (ankoatra ny fahazoan-dalana avy amin'ny mpitsara) ny famoahana ny fizotry ny raharaha heloka bevava rehetra ary manasazy “izay mandika ny lalàna, (nanaiky hisolo ny manampahefana napetraka) aorian'ny korontana”, ny sazy mety ho azo amin'izany tranga izany dia mety ho tonga hatramin'ny fanagadrana mandram-pahafaty.
Bechir Laabidi dia anisan'ireo Toniziana telopolo voampanga noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny hetsi-panoherana ara-tsosialy tao amin'ny faritra fitrandrahana any Gafsa izay hatao amin'ny talata ho avy indray ny fotoam-pitsarana ambaratonga ambony izay efa nisokatra tamin'ny 13 Janoary.
Tohin'ny fanamelohana hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina notononina tamin'ny raharaham-pitsarana ambaratonga voalohany tamin'ny 11 desambra tao Gafsa (350 km any atsimoandrefan'i Tunis) izany.
Nitranga ny fandraofana ireo gazety mpivoaka isan-kerinandro kanefa mbola nanokatra fanadihadiana ny departemantan'ny mpampanoa lalàna Toniziana mikasika ny famoahana tsy misy alalana nataon'ny Kalima, onjam-peo tantanin'i Sihem Bensedrine mpanao gazety ao amin'ny mpanohitra, araka ny loharanom-baovaon'ny fanjakana.
Nanomboka niasa tamin'ny Alatsinainy ny “Radio Kalima”, saingy nosavaina tamin'ny zoma ny toerany ary noraofina ireo fitaovana, araka ny filazan'ny iray tamin'ireo mpiara-miasa tamin'ny AFP .